प्राइमसँग सम्झौता भाँडिएपछि ओम डेभलपमेण्ट एनएमबिमा गाभिदै (स्वाप रेशियो कति ?) | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्राइमसँग सम्झौता भाँडिएपछि ओम डेभलपमेण्ट एनएमबिमा गाभिदै (स्वाप रेशियो कति ?)
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:४१ लगानी
प्राइमसँग सम्झौता भाँडिएपछि ओम डेभलपमेण्ट एनएमबिमा गाभिदै (स्वाप रेशियो कति ?)
जेठ २, काठमाडौं (अस) । ओम डेभलपमेण्ट बैंक एनएमबि बैंकसँग गाभिने भएको छ । यसअघि प्राइम कमर्शिएल बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको ओमलाई सम्झौता भाँँडिएपछि एनएमबिले प्राप्ती गर्न लागेको हो । यी दुई कम्पनीबिच गाभ्ने गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एनएमबीले बिहीवार ३ः३० बजे होटेल अन्नपूर्णमा कार्यक्रम राखेको छ । एनएमबि बैंकले दिएको जानकारी अनुसार दुवै कम्पनीबीचको मर्जर प्रक्रिया आगामी ३ महीना भित्र सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्नेमा सहमति भएको छ ।
प्राइमसँग सम्झौता भाँडिएपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई ३ महीनाभित्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्न निर्देशन दिएको थियो । मर्जरमा जाने सहमति भएपनि हालसम्म स्वाप रेशियोको विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । दुवै बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा अनुसार १० अंक थपघट हुनसक्ने गरी दुवै बैंकबीच सम्झौता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले भने १००ः ८० को स्वाप रेशियोको माग गरेको बुझिएको छ ।
हाल एनएमबि बैंकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख ६३ हजार रहेको छ भने ओम डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख ३५ हजार रहेको छ । दुवै बैंक एक आपसमा गाभिएपछि चुक्तापूँजी रू. १२ अर्ब १३ करोड ३३ लाख ९८ हजार पुग्नेछ ।
नेप्सेमा एनएमबि र ओम डेभलपमेण्ट बैंकको कारोबार रोक्का
प्राइमको मर्जरमा अलमलिएको ओमको नाफा ३० प्रतिशत बढी !
१२ बैशाख २०७६, बिहीबार १२:५५
प्राइम बैंक र ओम डेभलपमेण्टको मर्जर अन्योलमा
४ बैशाख २०७६, बुधबार ०२:१४
एनएमबि बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने सोमवार अन्तिम दिन
२५ चैत्र २०७५, सोमबार ११:३५